YEYINTNGE(CANADA): Thursday, May 19
19 May 2011 Yeyintnge's Diary.doc
19 May 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2400K View Download
19 May 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/19/20110အကြံပြုခြင်း
မြန်မာပြည်မှပေးစာ - ကဗျာအလင်္ကာတချို့ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
မြန်မာပြည်မှပေးစာ - ကဗျာအလင်္ကာတချို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဘာသာပြန် - ဇာဝါရီ)
မေ ၁၉၊ ၂၀၁၁
ဂျပန်သတင်းစာ မိုင်နီချီ (Mainichi Newspaper) ကို ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  မြန်မာပြည် မှပေး စာကဏ္ဍ စတုတ္ထမြောက်ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ မဖတ်ရသေးတဲ့ မိုးမခစာချစ် သူများအတွက် ဆီလျော်သလို မြန်မာဘာ သာ ပြန် ဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။ ရပ်ရေးရွာရေး၊ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ရန်ပုံငွေပွဲများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလုပ်ကိစ္စများကြောင့် ချက်ချင်းဘာသာ မပြန်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါ။ မိုးမခစာချစ်သူများ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Earth, water, fire, air. All four elements combined to wreak havoc on Japan. The land rumbled and cracked; then the sea sent upaterrifyingly exaggerated Hokusai wave that crashed down pitilessly on the already devastated coastline; then came voracious fire; then air, the last of the deadly quartet, entered the fray with its lethal cargo of radioactivity. So much has been written on the earthquake-tsunami that ravaged Japan on March 11, synonyms and superlatives related to horror and destruction have been all but exhausted.
ပထဝီ (မြေ)၊ အာဘော (ရေ)၊ တေဇော (မီး)၊ ဝါယော (လေ) ဓါတ်ကြီးလေးပါး ပေါင်းစုပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ကို ဗြောင်းဆန် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်အောင် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတော့တယ်။ မဟာပထဝီမြေကြီးက တဝုန်းဝုန်းတုန် လှုပ်ခါပြီး ကွဲအက်ကုန်ကြတယ်။ နောက် အဏာဝါပင် လယ်ပြင် ကနေ ကြောက်မက် ထိတ်လန့်စရာေ ကာင်းေ သာ ဟိုကူဆိုင်* ဧရာမရေလှိုင်းတံပိုးကြီးတွေ တရှိန်ထိုးတလိမ့်လိမ့် တက်လာပြီး ပျက်ဆီးနေတဲ့ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်ကို မညှာမတာ ဝါးမြိုဖျက်ဆီးပြန်တယ်။ နောက် အလျှံညီးညီး မီးတောက်မီးလျှံများလာပြန်တယ်။ ဒီ သေကြေပျက်စီးစေတဲ့ ဓါတ်ကြီးလေးပါးရဲ့  နောက်ဆုံးတခုဖြစ်တဲ့ လေလှိုင်းနဲ့အတူ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အဆိပ် အေ တာက် မီးခိုးမီးငွေ့များ တလုံးတခဲ ဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။ မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီ သဘာ ဝကပ်ဘေးအကြောင်း ပုံဖော်ရေးဖွဲ့ပြောဆိုရေး သားကြ တာတွေ အလွန်များပြားလှပေမယ့် ဒီလိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာ အနိဋ္ဌာရုံ ပျက်ဆီး မှုတွေကို စာဖွဲ့ရေးရတာ အလွန်စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းပါးလှပါတယ်။
There is another set of superlatives that has also been much in evidence: those relating to the qualities that make Japanese people seem custom-designed to cope with disaster: being disciplined, duteous, resilient, stoic, sedulous. The world watched with compassion and admiration as the people of the devastated nation went about the business of putting back to rights their shattered homes and cities in the understated, matter-of-fact manner that has come to be seen as the Japanese way. In the end, the ultimate, the most powerful element is the human spirit.
It serves to overcome whatever adversity any or all of the four physical elements might throw at man standing stubbornly, sometimes precariously, upright on two piffling legs.
ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ အဆိုးတွေထဲက အကောင်းတခုကို သက်သေသာဓကနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရရင်တော့ ဒီလို သဘာဝကပ်ဘေးဒဏ်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေမှာ အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရည်အသွေး များဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကတော့ စည်းကမ်းရှိမှု၊ တာဝန်ဝတ္တရား သိတတ်မှု၊ ဒူပေနာပေခံနိုင်မှု၊ ကြံ့ခံနိုင်မှု၊ စိုက် လိုက်မတ်တတ် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုတို့ ဖြစ်ကြတယ်။ ဖျက်ဆီးခြင်းခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ရဲ့  ပြည်သူတွေက မိမိတို့ရဲ့  ပျက်ဆီးပြိုပျက်နေသော အိမ်ယာအဆောက်အအုံများနဲ့ မြို့ ရွာတွေကို မွေးရာပါ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့  စိတ်ဓါတ် ကျင့်ကြံမှုအတိုင်း မငြီးမငြူ ပြန်လည်တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်နေကြတာကို တကမ္ဘာလုံးက ဂရုဏာ သက်၊ လေးစားမှုများနဲ့ ကြည့်ရှုအား ပေး နေကြတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ လူသားတွေရဲ့စိတ်ဓါတ် စွမ်းအားသည် သာ အန္တိမ သြဇာတိက္ကမအကြီးမားဆုံး ဖြစ်ပေသည်။ ဒီစိတ်ဓါတ်ခွန်အား ကြောင့် အလျှော့မပေးရင်ဆိုင်၊ တခါ တရံ ဘေးအန္တရာယ်ရှိလျှက် ခြေစုံမတ်ရပ်ပြီး ဒုက္ခတိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံ (ဝါ) အလုံးစုံသောရုပ်လေးပါးတို့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်လာတာတွေကို အောင်မြင်ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်။
Sweet are the uses of adversity, Which, like the toad, ugly and venomous, Yet wearsaprecious jewel in its head. Surely the jewel in the toad’s head is the human spirit, adamantine and brilliant in its innumerable facets cut and polished by the vicissitudes of life.
လှပချိုမြိန်မှုဟာ ဘေးဒုက္ခအခက်အခဲရဲ့ အသုံးတော်ခံဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖားပြုပ်ဆိုတာ ရွံစရာကောင်း အကျည်းတန်၊ အဆိပ်အ တောက်ရှိပေမယ့် သူ့ဦးခေါင်းထက်မှာ တန်းဖိုရှိတဲ့ စိန်ရွှေရတနာ ဆင်မြန်းထား လိုက် တဲ့အခါမှာတော့။ လူသားစိတ်ဓါတ်စွမ်းအားဟာ ဖားပြုပ်ဦးခေါင်းပေါ်က အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာလို ဘဝလောက ဓံထဲ အကြိမ်ဖန်များစွာ ဖြတ်တောက်သွေးသပြီးမှ ပြည့်ဝတောက်ပ ခိုင်မာလာသလိုဖြစ်တယ်။
A subdued echo of the fury of earth and sea unleashed on Japan the fateful day of the tsunami sounded in Burmaaweek later. An earthquake in the eastern part of the Shan plateau caused overahundred deaths, brought down buildings and split the Union Highway along the centre withadeep, forked crack. Meanwhile, strong winds lashed the seas south of the Irrawaddy delta and swept away thousands of fragile bamboo rafts bearing men whose job was to tend large fish nets staked offshore. Most of the men were able to get back to land withinafew days but as I write, aboutathousand are still said to be missing.
ဒီလို ဒေါသမာန်ဟုန် မဟာပထဝီမြေကြီး နဲ့ ပင်လယ်လှိုင်းတပိုးတို့ ဂျပန်ပြည်ကို ရိုက်ပုတ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီသဘာဝဘေးဒဏ်သင့်ခဲ့တဲ့နေ့ တပတ်အကြာမှာတော့ မြန်မာပြည်လည်း ကံကြမ္မာဆိုး ကျေ ရာက်ခဲ့ တယ်။ ရှမ်းရိုးမတောင်တန်း အရှေ့ ဖက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြေငလျင် ဒဏ်ကြောင့် လူပေါင်း တရာကျော်ေ သဆုံးခဲ့ပြီး၊ အဆောက်အဦးများစွာလည်း ပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ ပြည်ထောင်စု အဝေးပြေး လမ်းမကြီး လည်း နက်ရှိုင်းသော ခရင်းခွသဏ္ဍာန် ချိုင့်ကွက်ကြီးနဲ့ နှစ်ခြမ်းကွဲအက်သွားခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းဆိုသလို ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် တောင်ပိုင်းတဝိုက်ကို ပြင်းထန်တဲ့ လေများကျရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး ခနော်ခနဲ့ ဝါးေ ဖာင်ေ တွနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတဲ့ ကမ်းလွန်ရေ လုပ်သား တံငါးသည် ထောင်ပေါင်းများစွာလည်း ဒီလေနဲ့အတူ လွှင့်ပါမျောသွားကြတယ်။ တော်တော်များများကတော့ ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ ရက်ပိုင်းအ တွင်း သေကံမရောက်ကမ်းကို ပြန်ရောက်လာကြပေမယ့် ကျမ ဒီစာရေးနေချိန်အထိ ရေလုပ်သား တစ်ထောင် ခန့် ပျောက် ဆုံးနေဆဲလို့ သိရှိရတယ်။
Since the encounter with cyclone Nargis in 2008 the people of Burma have developed antennae highly sensitive to the natural disasters that seem to be occurring with greater frequency in all parts of the globe. Impulsive sympathy has matured into empathy born of personal experience. For many of us in Burma the struggle of the Japanese to rebuild their lives after the tsunami isamagnified image of our own efforts to help the people in our eastern hills and our southern delta get back toastate of normalcy after the relatively small, but nevertheless life changing, disasters that had befallen them.
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နာဂစ်လေမုန်တိုင်းကာလနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ တဝှမ်း မှာ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သဘာဝကပ်ဘေးဒဏ်တွေအကြောင်းကို ပိုမိုအာရုံစိုက် စာနာခံ စားလိုက်ကြတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ စာနာကြင်နာ မှု နှိုးဆော်မှုစိတ် ကနေ ထပ်တူထပ်မျှ မျှဝေခံစားတတ်တဲ့စိတ် ဖြစ်တည်လာတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ကျမတို့အဖို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေ စိတ်ဓါတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဆူနာမီအပျက်အစီးများကို ပြန်လည်တည်ဆောက် လုပ်ကိုင်နေကြတာ က မြန်မာပြည် အရှေ့ဘက် တောင်တန်းဒေသများနဲ့ တောင်ပိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တဝိုက်ရှိ ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှုေ တွကြောင့် ပြောင်းလဲပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့ သူတို့ တတွေရဲ့ဘဝတွေကို ပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်ဖြစ်အောင် ကျမ တို့တတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေတာကို ပုံကြီးချဲ့ဖော်ပြထား သလိုပါပဲ။
It is the human spirit that moves minds and hearts and bridges geographical and cultural divides. As soon as we heard of the calamity that had struck Japan we wondered what we could do to make her people know how close we felt to them in their suffering, how much we wished to be of some assistance in suchatime of trouble. Sadly, we were not inaposition to offer material aid of any kind. We then recalled that in addition to the rock-hewn qualities that enable them to face the most harrowing challenges, the Japanese people possessasensitivity to beauty and poetry that is the tender aspect of their strength. So we decided to put togetherasmall collection of poems that would go some way towards expressing how much at one we feel with the Japanese people in their dark hour.
အဲဒါ လူသားတွေရဲ့  စိတ်ဓါတ်စွမ်းအား - စိတ်နှလုံးသားတွေကို ရွေ့ လျားပြောင်းနိုင်ပြီး ပထဝီအရ၊ ယဉ်ကျေးမှု အ ရ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို ပေါင်းကူးဆက်စပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ သဘာဝကပ်ဘေး ကျရောက်တာကို ကြားကြားခြင်း ကျမတို့အနေနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါပြီး၊ ဒီလို ဒုက္ခဘေး ဒဏ်ခံနေရ ချိန်မှာ ကျမတို့အနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ကူညီပံ့ပိုးလုပ်ပေးချင်တယ့် စိတ်ဆန္ဒတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဂျပန်လူမျိုးတွေကို ပေးသိစေချင်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ ရုပ်ဝထ္တုပိုင်း ဆိုင်ရာ ကူညီပေးကမ်းဖို့ အခွင့်မသာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ အနေအထားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ လှပမှု နဲ့ ကဗျာအလင်္ကာ ခုံမင်နှစ်သက်ကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် သူတို့တွေ့ကြုံခံစားနေကြရတဲ့ ကာယဒုက္ခ၊ စိတ္တဒုက္ခများနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ အကောင်ဆုံး ခွန်အား ဖြစ်စေမယ့် ကဗျာအလှလင်္ကာများကို ကမ်းလှမ်းဖို့ သတိရမိတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့တတွေ ကဗျာစာစုတအုပ် စုစည်းတင်ပြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ တယ်။ ဒီလို ကံကြမ္မာဆိုး အမှောင်ကာလထဲက ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့အတူ ကျမတို့တတွေ ဘယ်လိုခံစားကြရတယ် ဆိုတာကို ဒီကဗျာတွေနဲ့ တနည်းတဖုံ ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Among those who contributed to our slip of an anthology are writers and poets who have suffered much in the struggle to assert the primacy of the human spirit. There is Hanthawaddy U Win Tin, member of the Executive Committee of the National League for Democracy, who wasaprisoner of conscience for twenty years, released only in 2008 when he was close to his seventy-ninth birthday. While still in jail he had written lines that roared outachallenge to those who had deprived him and others like him of their freedom: “Will the man crumble, or will the prison crumble?” Predictably, his poem for the Japanese people is equally vigorous. He writes of the “dragon tsunami, reincarnation of the Hiroshima bomb” and drawsacomparison between the “hell of power” and the “hell of waves.”
ဒီစုစည်းထုတ်ဝေတဲ့ ကဗျာစုမှာ ပါဝင်ရေးသားကြတဲ့ စာရေးဆရာတွေနဲ့ ကဗျာဆရာတွေအနက် တချို့က လူသားစိတ်ဓါတ်ခွန်အားနဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို ရုန်းကန်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ် တယ်။ နိုင်ငံရေးယုံကြည် ချက်ကြောင့် နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် အသက် (၇၉) နှစ်ပြည့် သူ့မွေးနေ့ချိန် ခါနီးမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့  ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်လည်း တဦးအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ ထောင်တွင်းအကျဉ်းကျခံနေရစဉ် ကာလမှာ သူကို ချုပ်နှောင်းပိတ်ပင်ထားခဲ့သူတွေနဲ့ သူလိုပဲ လွတ်မြောက်မှုလိုသူများကို “လူပဲ လဲပြိုပျက်စီးမ လား၊ ထောင်ပဲ ပြိုလဲပျက်စီးမလား” လို့ ဟစ်ကြွေး စိန်ခေါ်ရေးဆိုခဲ့တယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ သူသီ ကုံးရေးဖွဲ့လိုက်တဲ့ ကဗျာက စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ “ဆူနာမီနဂါး”၊ “ဟီရိုရှီးမား ဗုံးဝင်စား” ကဗျာများကိုလည်း ရေးဖွဲ့ပြီး “အာဏာငရဲ” နဲ့ “လှိုင်းငရဲများ” လို့လည်း နှိုင်းယှဉ်ရေးဖွဲ့ သီးကုံးထား တယ်။
Three more of our poets have also served prison sentences for their political beliefs and activities. All of them view the challenges of the tsunami in terms ofacombat between savagery (of nature as well as of man) and benevolence,acontest between travail and the human spirit. All, despite, or perhaps because of, the hardships they themselves have undergone stand firmly on the side of the triumph of the spirit.
တခြားကဗျာဆရာ (၃) ယောက်လည်း သူတို့ရဲ့  နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်၊ လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အကျဉ်းကျ ချုပ်နှောင်းခံခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့တတွေအားလုံး ဆူနာမီလှိုင်းရဲ့  အကဲစမ်းစိမ်ခေါ်မှုတွေကို သဘာဝနဲ့ လူသားတွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု နဲ့ ကောင်းကျိုးတရား တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ၊ ဒုက္ခဝေဒနာ နဲ့ လူသားစိတ်ဓါတ်စွမ်း အားတို့ အားပြိုင်မှုတို့ကို ရှုမြင်သုံးသပ်ရေးဖွဲ့ဆိုထားကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲမှု ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို သူတို့ခံစားနေခဲ့ကြရပေမယ့် သူတို့တတွေ အမှန်တရားဘက်ခြမ်းမှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နေကြတယ်။
Nyein Thit writes: It is the darker kind of darkness / That heralds the dawn, / Truth pulls itself up on this darkness. / Oh World. . . . / You too, grab this darkness bravely and haul yourself up.
ဆရာငြိမ်းသစ်က အမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အမှောင်ထုကြီးက အာရုဏ်ဦးရဲ့  ရှေ့ ပြေးနိမိတ်။ အမှန်တရားက အမှောင်ထုထဲကနေ ရုန်းထွက်လာတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရေ သင်လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဒီအမှောင်ထုကြီးကို ဖယ်ရှားပြီး ရုန်းထလိုက်ပါတော့လို့ တင်စားရေးဖွဲ့သီကုံးထားတယ်။
Monywa Aung Shin contrasts the “black” Friday of the tsunami with the “white” of global compassion and lauds the fine sense of duty of the Japanese people.
မုံရွာအောင်ရှင်ကတော့ ကြေကွဲထိတ်လန့်စရာ ဆူနာမီလှိုင်းသင့် သောကြာနေ့ဆိုးကို မေတ္တာအဖြူရောင်လွှမ်း ကမ္ဘာ့ကြီးရဲ့ ဂရုဏာရသနဲ့ ခွဲခြားဆန်ကျင်ပြဆိုပြီး ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့  ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အရည်အသွေး ကို ချီးကျူးထောပနာပြု ရေးဖွဲ့ဆိုထားတယ်။
Phyapon Ni Lon U ends his poem on the tsunami with the simple assertion that the evil wrought by the pitiless wave cannot overwhelm the might of man.
ဖျာပုံနီလုံဦးကတော့ စွမ်းအားရှင်လူသားကို မကောင်းမိစ္စာဝင်နေတဲ့ ဆူနာမီလှိုင်းတွေက စာနာမဲ့ကင်းမဲ့စွာနဲ့ မဖျက်ဆီးနိုင်ပါဆိုပြီး သူ့ကဗျာ ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အဆုံးသတ်ထားတယ်။
We believe that Japan will vindicate our poets.
ကျမတို့ ကဗျာဆရာတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ အားပေးခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Note: This letter should have been “Animal Talk (2)” but in the wake of the tsunami I see that rumination s on animals would not be appropriate at this juncture.
မှတ်ချက် ။ ။ တကယ်တော့ ဒီပေးစာဆောင်းပါးက တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း စကားစမြည်အပိုင်း (၂) ဖြစ်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ (ဂျပန်လူမျိုးေ တွ) ဆူနာမီဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့ ဒီလိုအချိန်ကာလမှာ တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း ဆက်ပြောနေလို့ မသင့်တော်လို့ပါ။
* Hokusai = ရှေးဟောင်း ဂျပန်ပန်းချီဆရာကြီး ခတ်ဆူရှိခ ဟိုကူဆိုင် (Katsushika Hokusai ) ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ The Great Wave off Kanagawa, ဧရာမ Kanagawa ရေလှိုင်းလုံးကြီးပန်းချီကားမှ ဆင်းသက်လာတဲ့စကားအသုံးအနှုန်း။
By ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 18 မေ 2011
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၁၇ မိနစ်
ဗမာပြည်တပြည်လုံး၊ တကမ္ဘာလုံးကတောင်းဆို မျှော်လင့်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး
ပြဿနာကို နအဖအမွေခံ အရပ်ဝတ်စစ်အစိုးရက ဒီလ၁၆ရက်နေ့မှာ အကြောင်းပြန်လိုက်ပါပြီ၊
အချိန်က ဦးသိန်းစိန်အင်ဒိုနီးရှားက ပြန်လာကာစ၊ တရုတ်ပြည်ကိုသွားမလို့ အထုပ်အပိုးပြင်နေတဲ့အချိန်။ တိုက်ဆိုင် တာလား။ ချိန်ကိုက်လုပ်တာလား။ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခွင့် အဖြေမထွက်လို့ ပတ်မကြီးကို ထိုးဖောက်ပြတာလား၊ တရုတ်အစိုးရလောက်တော့ ဒါလောက်လုပ်ပြလိုက်ရင် ရပါတယ်လို့ တွက်တာလား၊ သေချာတာကတော့ လုံးဝမရိုးသားတာပါပဲ။
လှောင်ချိုင့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို စတာ ပြောင်တာဟာ အင်မတန် ရိုင်းတယ် ဆိုရင် အနှစ် ၁ဝဝ ထောင်ချခံနေရတဲ့လူကို ဒီလို သရော်လှောင်ပြောင်တာဟာ ပိုလို့တောင် ရိုင်းပါသေးတယ်။
တကယ်က ဒီကာလတလျှောက်မှာ ဗမာပြည်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကိုလွှတ်ပေးရေးဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ ပြောဆိုသံတွေ
ပြည်တွင်းပြည်ပမှာနားလျှံနေအောင်ကြားနေရပါတယ်။ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလုပ်တဲ့ လက်မှတ်စုဆောင်းပွဲမှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ ဗမာပြည်က လက်လုပ်လက်စား ဆင်းရဲသားကအစ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးရဲ့ကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေးနမ်ဘီးယားအထိ အားလုံးတသံတည်းထွက်၊ တလေထဲ တောင်းဆိုနေကြတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ အခုလို ထောင်အနှစ် ၁၀၀၊ ၆၅နှစ်ကျနေသူကို တနှစ်လျှော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာဟာ အားလုံးကို
စော်ကားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့ရဲ့အခုလုပ် ရပ်ဟာ အင်္ဂလိပ် စကားထဲက add insult to injury ဆိုတဲ့ “ထိခိုက်အောင်လုပ်ထားသူအပေါ် စော်ကားမှုစွက်လိုက်တယ်” ဆိုတာလိုပဲ အားလုံးကို အစော်ကားကြီး
စော်ကားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လှောင်ချိုင့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို စတာ ပြောင်တာဟာ
အင်မတန်ရိုင်းတယ်ဆိုရင် အနှစ် ၁ဝဝထောင်ချခံနေရတဲ့လူကို ဒီလိုသရော်လှောင်ပြောင်တာဟာ ပိုလို့တောင်ရိုင်းပါသေးတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်က ဦးသိန်းစိန်သမ္မတဖြစ်ပြီဆိုတုန်းက သူ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ချီးမွမ်းခန်းထုတ်ခဲ့သူများကို သင်ခန်းစာ ထပ်ပေးတယ်လို့ ယူမှတ်ရမှာပါပဲ။
ဒီစစ်ဗိုလ်တွေ ဘာအဝတ်အစားပဲ ဝတ်ထား၊
ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ မောက်မာမှု ကို လုံးဝမစွန့်လွှတ်ဘူး ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကို ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေကြတဲ့ နိုင်ငံတွေကပါ အရပ်ဝတ်စစ်အစိုးရရဲ့ အခုလိုလုပ်ရပ်ကို ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဦးသိန်းစိန်တို့
ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အဲဒီလိုသိလျက်နဲ့ ဒီရိုင်းပျ
စော်ကားလှတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် နာမည်နဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာ ဒီစစ်ဗိုလ်တွေ ဘာအဝတ်အစားပဲ ဝတ်ထား၊ ဝတ်ထား၊ သူတို့ရဲ့ အတွင်းသဘောထားဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ မောက်မာမှု ကို လုံးဝမစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဟာ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့နဲ့ ဒီကိစ္စကိုပြောပြီး ပြန်သွားလို့ ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲ လုပ်ချလိုက်တာဖြစ်နေတော့ ဗီဂျေးနမ် ဘီးယားရဲ့ ကျောပြင်ကို ဗိုလ်ချုပ်တွေက
မေးငေါ့နေတာကိုတောင် မြင်ရသလိုလိုရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအစိုးရသစ်ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို ချစ်တီးခေါင်း သန်းရှာသလိုရှာပြီး ချီးမွမ်းခန်းထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အခုတော့ဘာများပြောပါအုံးမလဲလို့တောင် မေးချင်စရာ
နအဖတဖြစ်လဲ အရပ်ဝတ်စစ်အစိုးရရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တနေ့တခြားထောက်ခံသူနဲ့
ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများပြားလာနေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုတုန့်ပြန်အဖြေပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းနေ ပါတယ်။ တချို့အာဏာရသူတွေဟာ လူထုရဲ့ဆန္ဒကိုတိုက်ရိုက်မရင်ဆိုင်ပဲ ဒီလိုနည်းနဲ့ တုန့်ပြန်အဖြေပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့မောက်မာမှု၊ မရိုးသားမှုကို ဖော်ပြတာဖြစ်ရုံမက လူထုကြီးကိုမရင်ဆိုင်ရဲကြောင်း၊ အမှန်တရားကိုမရင်ဆိုင် ရဲကြောင်း ဖော်ပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တပါတည်း ထောက်ပြဖို့လိုတာတခုက ဦးသိန်းစိန်တို့ အရပ်ဝတ်စစ်အစိုးရဟာ နအဖရဲ့ရန်ငြိုးအာဃာတတွေ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကို ပုဒ်မတခုမကျန်ဆက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်တာတောင် ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာလွှတ်တယ်ဆိုတဲ့ စစ်အုပ်စုတွေရဲ့ယတြာဝါသနာကိုပါ ဆက်ခံထားတာလည်း မှတ်လောက်သားလောက် သတိထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အရပ်ဝတ် ပြောင်းလိုက်တာနဲ့၊ ပါးစပ်က နတ်စကားထွက်လိုက်တာနဲ့ သဏ္ဌာန်ရောအနှစ်သာရပါပြောင်းသွားပြီလို့ ပြောနေသူတွေကို ဒီ “ပြည်ထောင်စုသမ္မတ
မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ အမိန့်အမှတ် ၂၈/၂ဝ၁၁”ဆိုတာကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး ဘယ့်နှယ်ရှိစလို့
ဒီအရပ်ဝတ်စစ်အစိုးရဘက်ကကြည့်ရင် ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အခုအချိန်မှာလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟာ ဒီနေ့ဗမာနိုင်ငံပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုနေတာကို အလျှော့ ပေးလိုက်ရာကျမယ်၊ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရာကျမယ်၊ နောင်မှာအစဉ်အလာဖြစ်သွားမယ် စသဖြင့် ပူပန်စရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးကိုသူတို့ရဲ့“လွှတ်တော်”ထဲမှာတင်ပြတယ်ဆိုရင် အသာလေး
ဒါမျိုးကိုသူတို့ရဲ့“လွှတ်တော်”ထဲမှာ တင်ပြတယ်ဆိုရင် အသာလေး
ခေါက်ထားလိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုဗမာသိ - ကမ္ဘာသိ တင်ပြလာတာ ကိုတော့ သူတို့အနေနဲ့ မတုန့်ပြန်လို့ မရတာနဲ့ တုန့်ပြန်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်
ခေါက်ထားလိုက်လို့ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုဗမာသိ-ကမ္ဘာသိ တင်ပြလာတာကိုတော့ သူတို့အနေနဲ့ မတုန့်ပြန်လို့မရတာနဲ့ တုန့်ပြန်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ရေးဟာ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတဲ့အပြင် အထင်သာ အမြင်သာဆုံး ဖော်ပြချက်တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာမှာ ဦးသိန်းစိန်တို့ဟာ အရင်နအဖနဲ့သဘောထားတခုထဲ ဆိုတာကိုကြည့်ရင် ၂ဝ၁ဝရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ဗမာပြည်မှာဘာအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအရပ်ဝတ်စစ်အစိုးရဟာ နအဖရဲ့မူပေါ်လစီတွေသာမက လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကိုပါ အကုန်ဆက်ခံ ထားတာဖြစ်လေတော့ ဗမာပြည်ပြည်သူတွေဘက်က ပြောရရင်လည့်း ကိုယ့်အရေးတော်ပုံရဲ့လက္ခဏာ၊ ကိုယ်တင်ရမယ့် ကြွေးကြော်သံစတာတွေဟာ ဘာမှမပြောင်းလဲသင့်ပါဘူး။ နအဖကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တုန်းက အလံကိုပဲလွှင့်ထူပြီး အဲဒီအရေးတော်ပုံကိုပဲ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာပါ။
ဓားသွေးနေတဲ့လူဟာ စိတ်ကူးယဉ်နေမိရင် ဓားမထက်ဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မတော်ရင် ကိုယ့်လက်ကိုရှတာတောင်
ဒေါ်စုကို တွေ့ဆုံရန် ဇေယျာသော် ကြိုးပမ်း
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၁၇ မိနစ်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ထောင်မှ လွတ်လာပြီးနောက် ဟစ်ပ်ဟော့ပ်အဆိုတော် ဇေယျာသော်က အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
“ကျနော် သူ့ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ကို လေးလည်း လေးစားတယ်၊ အားလည်း ကိုးတယ်၊ သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ရပ်တည်ချက်တွေဟာ ပြည်သူတွေအပေါ် အကျိုးရှိစေမယ်ဆိုတာ ယုံတယ်။ ဒါကြောင့် အန်တီစုနဲ့ တွေ့ချင်တာ” ဟု ဇေယျာသော်က ပြောသည်။
အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး Generation Wave ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သော ၃၁ နှစ်အရွယ် အဆိုတော်သည် မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော့သောင်း အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်။
သူ့ကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်ထဲတွင် တရားမဝင် အသင်းဖွဲ့စည်းမှု ပုဒ်မ ၆/၈၈ နှင့် နိုင်ငံခြားငွေ ကိုင်ဆောင်မှု ပုဒ်မ ၂၄/၁ တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ရာ အထူးအယူခံရသည့်အတွက် ၄ နှစ် ချခံရသည်။ လွတ်မြောက်လာစဉ်တွင်
ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ကျော်ကျခံပြီး ဖြစ်သည်။
ဇေယျာသော်သည် အဆိုတော် အနဂ္ဂ၊ ဟိန်းဇော်၊ ရန်ရန်ချန်းတို့နှင့်အတူ ၂ဝဝဝ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ဟစ်ပ်ဟော့ပ် အဖွဲ့ဖြစ်သော အက်ဆစ်အဖွဲ့ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်မှပေးစာ - ကဗျာအလင်္ကာတချို့ (ဒေါ်အောင်ဆန်း...